विज्ञको अभावमा उपत्यकामा चुक्यो विप्लवको मिसन ! माइला लामा खोज्दै प्रहरी - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > विज्ञको अभावमा उपत्यकामा चुक्यो विप्लवको मिसन ! माइला लामा खोज्दै प्रहरी
June 2, 2019 June 2, 2019 GRISHI506
वर्षअघि रोल्पामा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग माइला लामा । फाइल तस्बिरः माइला लामाको फेसबुक
काठमाडौं । विभिन्न स्थानमा बम राखेर जनतामा त्रास फैलाउने र राज्य संयन्त्रलाई तर्साउने नीति लिएर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले गएको आइतबार काठमाडौं उपत्यकामा गरेको विस्फोट आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । आइतबार सुकेधारा र अनामनगरमा भएका शृंखलाबद्ध बम विस्फोटमा चार जनाको ज्यान गयो । आठजना पक्राउ परेका छन् । ज्यान गुमाउने सबै विप्लव समूहकै सदस्य रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार बिहान विस्फोट गराउने योजना अनुसार राजधानीका १० स्थानमा विप्लव समूहको टोली तैनाथ थियो ।
तर, योजनाअनुसार काम हुन सकेन । अनामनगरको घट्टेकुलो र सुकेधारामा बम विस्फोटमा चारजना कार्यकर्ता मारिए । जसमा गोकुल रानामगर सैन्य कमान्डर थिए । दाङ घर भएका गोकुल २०५८ मै तत्कालीन नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । उनी विप्लव समूहका सैन्य कमान्डर थिए । लामो समयपछि बम बनाउन लाग्दा ज्ञानको अभावमा विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्स छ ।
“कम्तीमा १८ स्थानमा प्रेसर कुकर बम राख्ने पार्टीको योजना थियो । त्यो मान्छे मार्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थिएन । तर बनाउँदा बनाउँदै हाम्रै साथीहरु परे । प्रायः बम राख्ने समूहका नयाँ र ज्ञान नभएका व्यक्तिहरु थिए,’’ विप्लव समूहका एक नेताले भने । कोटेश्वरबाट चार प्रेसर कुकर बमसहित समातिएका ६ जनाले पनि ती कुकरमा बारुद भर्ने र विभिन्न स्थानमा राख्ने योजना तय भएको बयान दिएका छन् ।
प्रहरी अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने विप्लव समूहका हातहतियारसम्बन्धी विज्ञ सबैजसो जेलमा छन् । थोरैमात्र बाहिर छन्, जसलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ । २० फागुन ०७५ मा सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ४२६ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये ७१ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने ८७ जनामाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन् । प्रहरीले आइतबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेका विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताले बयानका क्रममा विस्फोटको योजनाबारे खुलाएका छैनन् । एक अधिकारीले भने, ‘‘सबै काठमाडौं बाहिरबाट आएका छन् । तर यो टाइम बम नभएर कुकर बम भएको पुष्टि भने भएको छ । पक्राउ परेकाहरुबाट अनुसन्धान थप बलियो हुनेछ ।’’
माइला लामा खोज्दै प्रहरी
काठमाडौंको सीतापाइलाका माइला लामा विप्लव समूहको उपत्यका व्युरो प्रमुख हुन् । काठमाडौंमा हुने सबै योजना माइलाकै निर्देशनमा हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लामा तत्कालीन माओवादीको जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्षसमेत थिए । २०६४ मा उनी काठमाडौंबाट निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार भएका थिए ।
मोहन वैद्यको नेतृत्वमा तत्कालीन एकीकृत माओवादी विभाजन भएपछि लामा पनि वैद्य समूहमै लागे । वैद्य समूहबाट विप्लव अलग्गिएसँगै लामा पनि उतै गए । त्यसपछि उनलाई विप्लव नेकपाको उपत्यका हर्ने जिम्मेवारी दिइयो । लामा गीतसंगीतमा रुची राख्ने व्यक्ति हुन् । विप्लव नेकपामा माइला लामाले पार्टी र अपरेसनको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै पार्टीभित्र विरोधसमेत भएको थियो । आइतबारको विस्फोटमा आफैंतिर क्षति भएपछि माइला लामामाथि थप दबाब पार्टीभित्रबाटै बढेको छ ।
विप्लव समूहको काठमाडौं जिल्ला इञ्चार्ज भने भृकुटी उपनामले चिनिने धिरिन्द्रा उपाध्याय हुन् । उनी तत्कालीन माओवादीको कोटामा कालीकोटबाट समानुपातिक सभाषदसमेत भएकी थिइन् । विप्लव समूहले हेमन्तप्रकाश वली ‘सुर्दशन’ पक्राउ परेपछि मध्यकमाण्डको जिम्मेवारी खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई दिएको छ । बीचमा केही समय प्रकाण्डलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीका सबै धारणा विप्लवले नै विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।- बाह्रखरी